Poa-basy indroa teny Soavina: teratany karana sy tonizianina lasan’ny mpanao kidnapping | NewsMada
Teratany karana, mpandraharaha indostrialy, mpanafatra PPN, i Malik Karmaly. Mpiara-miasa akaiky amin’ity farany ihany ny faharoa, teratany tonizianina: i Sofiane Omrani. Ny tolakandron’ny asabotsy teo no nakan’ny andian-jiolahy, nirongo basy, azy roa lahy ireo, teny Soavina Atsimondrano.
Io indray! Nalain’ny jiolahy efa-dahy samy nitondra basy Kalachnikov teny Soavina Tanjombato, ny asabotsy tamin’ny 12 antoandro, ny teratany karana roa lahy: i Malik Karmaly, mpandraharaha tompon’ny orinasa Habibo Group sady mpanafatra PPN, sy i Sofiane Omrani, 47 taona, teratany tonizianina mpandraharaha ihany koa, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny fikambanan’ny teratany karana mizaka zom-pirenena frantsay miasa sy monina eto Madagasikara (CFOIM). Raha ny fampitam-baovao voaray, nandeha fiara 4×4 V8 izy ireo niaraka tamin’ny fiara 4×4 Pick-up iray nitondra ny mpiambina miisa efatra. Narahin’ireo jiolahy avy aoriana ireto fiara ireto ka nalain’ireo jiolahy an-keriny teo amin’ny dongona fampihenana hafainganam-pandeha ny fiara, akaikin’ny orinasa iray eny Tanjombato, ireto Karana roa lahy ireto. Nirefotra ny poa-basy ary mitovy amin’ireny horonantsarimihetsika ireny, raha ny fahitan’ireo olona nahita ity fakana an-keriny ity. Tsy afa-nihetsika sady tsy sahy nanohitra ireo mpiambina tao anatin’ilay fiara 4×4. Nasain’ireo jiolahy niondrika ireo mpiambina. Tsy vitan’izay fa notifirin’ireo jiolahy koa ny kodiaran’ilay fiara 4×4 nitondra ireo mpiambina ireto teratany karana roa lahy ireto. Tao anatin’ny minitra vitsy monja avokoa ny nisehoan’izany rehetra izany.
Mihantsy ny fanjakana ireo mpaka an-keriny…
Ny fiara 4×4-n’ireto Karana ireto ihany no nentin’ireo jiolahy nitondra an’i Malik sy i Sofiane, narahin’ny fiara nampiasan’ireo jiolahy. Nizotra nianatsimo kosa ny lalan’ireo jiolahy taorian’izay. Hatramin’ny omaly hariva, tsy mbola nahazoam-baovao ny momba ity raharaha ity ny eo anivon’ny mpitandro filaminana sy ny fianakavian’ireto Karana ireto. Vao herinandro izay ny azon’ny zandary teny am-pelatanan’ny jiolahy i Arman Kamis ary nisy olona ambony voasaringotra sy tompon’antoka amin’ity raharaha ity, izao miverina izao indray ny fakana an-keriny. Mihantsy ny fanjakana mihitsy ve izany ireo mpanao kidnapping? Ny eo voasambotra, mipoitra sahady indray ny manaraka. Nasiana fanamboarana koa, nandritra ny filankevitry ny minisitra, ny vondrona miady amin’ny fakana an-keriny. Arakaraka ny nanamboarana izany anefa no vao mainka mampirongatra azy. An’iza indray rahampitso sy rahafakampitso? Efa niteny rahateo ny minisitry ny Fitsarana fa avelao hiasa ny fitsarana fa aza helingelenina. Tao anatin’ny iray volana, trangana fakana an-keriny karana miisa enina no nitranga, araka ny fanazavan’ny CFOIM.